Xinhua Myanmar - တရုတ် နိုင်ငံ အမျိုးသား ဖွံ့ ဖြိုး တိုးတက်ရေး နှင့် ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး ကော်မရှင် ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ်တို့ တွေ့ ဆုံ ဆွေးနွေး
တရုတ် နိုင်ငံ အမျိုးသား ဖွံ့ ဖြိုး တိုးတက်ရေး နှင့် ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး ကော်မရှင် ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ်တို့ တွေ့ ဆုံ ဆွေးနွေး
တရုတ် နိုင်ငံ အမျိုးသား ဖွံ့ ဖြိုး တိုးတက်ရေး နှင့် ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး ကော်မရှင် ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ်တို့ တွေ့ ဆုံစဉ်(ဆင်ဟွာ)	Politics
ရန်ကုန် ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ အမျိုးသား ဖွံ့ ဖြိုး တိုးတက်ရေး နှင့် ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး ကော်မရှင် ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Ning Jizhe ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း တို့ သည် ယနေ့ နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး ၊ သံတမန်ခန်းမ၌ တွေ့ ဆုံ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ တွေ့ ဆုံရာတွင် ရန်ကုန်မြို့သစ် စီမံကိန်း အတွက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး တွေ့ ဆုံပွဲသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဦးမြင့်သောင်း ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ သစ်တောနှင့် စွမ်းအင် ဝန်ကြီး ဌာန ၀န်ကြီး ဦးဟံထွန်း နှင့် ဌာနဆိုင်ရာမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ် နိုင်ငံ အမျိုးသား ဖွံ့ ဖြိုး တိုးတက်ရေး နှင့် ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး ကော်မရှင် ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌတို့ တွေ့ ဆုံစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ထိုနောက် တရုတ် နိုင်ငံ အမျိုးသား ဖွံ့ ဖြိုး တိုးတက်ရေး နှင့် ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး ကော်မရှင် ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Ning Jizhe ဦးဆောင်သော အဖွဲ့သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မောင်ထွန်း နှင့် တွေ့ ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ယင်းတွေ့ ဆုံပွဲသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလင်းနိုင်မြင့် ၊ ပြည်သူ့ ငွေစာရင်း ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင့်လွင် ၊ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်သက်ထားနွယ်ဝင်း၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ စီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးကော်မတီ အတွင်း ရေးမှူး ဦးကျော်ဇေယျ၊ အဖွဲ့ဝင် ဦးထွေးတင်(ခ) ဦးမြသိန်းနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ရုံးမှ တာဝန် ရှိသူများ တက်ရောက် ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
Previous Article တရုတ်နိုင်ငံ NDRC ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ နှင့် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ တွေ့ ဆုံ ဆွေးနွေး
Next Article တရုတ် နိုင်ငံ ရှီးအန်း မြို့ နှင့် ရန်ကုန် မြို့ အပြန်အလှန် တိုက်ရိုက် ပျံသန်း သည့် လေကြောင်း ခရီးစဉ်သစ် စတင် ပျံသန်း